Rooble oo dalab u diray Ganacsatada Muqdisho | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Rooble oo dalab u diray Ganacsatada Muqdisho
Rooble oo dalab u diray Ganacsatada Muqdisho
Siihayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa kala hadlay ganacsatada Soomaaliyeed in aysan shacabka ku qaaliyeyn maciishadda iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha bulshada xilligan dalku wajahayo laba kacleynta xanuunka COVID-19, dowladduna u sameyneyso canshuur dhaaf badeecooyinka daruuriga ah.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Cali Gabeyre, ayaa sheegay in ganacsatadu ay diyaar u yihiin in ay dowladda kala shaqeeyaan xakameynta xanuunkan, dowladduna uga mahadceliyay u heellanaanta codsiyadii ganacsatada ee la xiriiray in badeecooyinka qaar canshuur dhaaf loo sameeyo.
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda JFS Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in sheegay in kulanka Ra’iisul Wasaaruhu la qaatay ganacsatada la iskula afgartay in ganacsatadu doorkooda ka qaataan la tacaalidda xanuunka COVID-19.
Xilligaan waxaa Soomaliya markale kusoo laba kacleeyay cudurka safmareenka ah ee COVID-19, waxaana Muqdisho ugu dhintay dad badan halka kuwo kale ay la jiifan.
Maqaal horeMidowga Musharixiinta oo ka jawaabay Go’aankii dowladda
Maqaal XigaIngiriiska oo soo saaray baaq saameeynaya Soomaaliya